पोखरामा तिन दिन देखि मजदुरहरु भो’कै ,अ’लपत्र परेपछि रातीको ११ बजे गरियो उ’द्दार (भिडियोसहित) – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. पोखरामा तिन दिन देखि मजदुरहरु भो’कै ,अ’लपत्र परेपछि रातीको ११ बजे गरियो उ’द्दार (भिडियोसहित) – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
पोखरा ।। पोखराको भलाममा केहि महिनादेखि सिचाईको नाला बनाउने काममा ज्याला मजदुरी गर्दै आएका १५ जना मजदुरहरु अल’पत्र परेका छन्।
आफुहरुले काम गर्दै आएको ठाउमा काम सकिएपछि ठेकेदारले पैसा पनि न’दिएको र आफुहरुलाई खाने रासन पनि नभ’एपछि आफुहरु अल’पत्र परेको पी’डितले बताएका छन्।
केहि महिना अगाडी देखि उनीहरु भलाममा काम गर्दै आएका थिए। ठेकेदारले दिएको काम सबै सकिएपछि उनीहरु नया कामको खोजीमा थिए। ल’कडाउनको बेलामा आफुहरुले गरेको कामको पारि’श्रमिक नपा’उदा बचत भएको पैसा पनि सकिएपछि ३ दिनदेखि भो’कै रहेको र ठेकेदारले पनि आफुहरुलाई केहि व्यवस्था नग’रेपछि आफुहरु राती राती ठेकेदार खोज्दै आईपुगेको पी’डितले बताएका छन् ।
आफुहरुले काम गर्दै आएको ठाउको ठेकेदार खोज्दै १५ जना मजुदुरहरुलाई पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ५ मा हिजो बेलुका ८ बजे अल’पत्र परेको अवस्थामा भेटिएको हो। लकडा’उनको समयमा यति धेरै मानिसहरु किन झोला कपडा सहित निस्किए होलान भन्ने एउटा प्रश्न सबैको मनमा सृजना भैरहेको थियो।
स्थानीय बासिन्दाका अनुसार उनीहरु ठेकेदारको खो’जीमा वडा नम्बर ५ मा आईपुगेका रहेछन। रातीको ८ बजिसकेको थियो। नजिकै गएर बुज्दा उनीहरु ३ दिन देखि भो’कै रहेको र ठेकेदारले आफुहरुले पाउने हिसाब दिएमा आफुहरु आफ्नो गाउ बर्दिया जाने बताउदै थिए।
सबैजना स्थानिय बासिन्दा त्र’सित थिए भने अर्को तिर कसरी सहयोग गर्ने होला भन्दै सम’स्याको समा’धानको खो’जीमा रहेका थिए। त्यही क्रममा पि’डितले आफुहरुको सम’स्याको समा’धान हुने आ’शामा पोखरा महानगरपालिका प्रवक्ता एवं पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ५ का वडाअध्यक्ष धन बहादुर नेपालीलाई फोन गरे र आफ्नो स’मस्या बताए। पि’डितको स’मस्या सुनिसकेपछि अध्यक्ष र संचारकर्मीको सहयोगमा उनीहरुलाई त्यही हलमा बस्ने व्यवस्था मिलाईयो। तिन दिन देखि भो’कै रहेको बताउने उनीहरुलाई रातीको ८ बजेको हुनाले तत्काल खाना पकाएर खुवाउन स’म्भव थिएन । सम’स्याको समा’धानको रुपमा वडा अध्यक्षको पहलमा नजिकैको होटेलबाट उनीहरुलाई प्रति ब्यक्ति च्याउचाउ,२ ओटा अण्डा र चिउराको व्यवस्था गरिएको थियो ।
अ’लपत्र परेका मजदुरलाई रातीको लागि बस्ने,खाने व्यवस्था मिलाईएको भएपनि उनीहरको ठेकेदार कहाका थिए ? किन यसरी अल’पत्र पारिदिए भन्ने कुराको भने समा’धान हुन् सकेको थिएन। त्यही क्रममा मजदुरहरुको ना’ईकेको रुपमा चिनिने एकजनाले ठेकेदारको घर आफुले देखेको र रातीको समय भएको हुनाले अलि प’त्ता लगाउन अ’सहज भएको बताए। उनको सबै कुरा सुनीसकेपछी उनको अनुरोध अनुसार समय नेपाल तथा मेरो साथी टिभीका संचारकर्मी द्वारा पोखराको सृजनाचोक हुदै उनलाई बाइकमा बाटो देखाउदै खोज्ने प्रयास गरियो । आफुलाई सृजनाचोक हुदै जाने बाटो याद भएको हुनाले उनले पत्ता लगाउने बताएपछि हामी खोजीकार्यमा लागेका थियौ ।
पत्रकारको आफ्नै बा’ध्यता पनि थियो। रातीको ११ बजिसकेको थियो । दिनभरीको कामको थ’काई र भो’कले शरीर ग’ली रहेको थियो । रातीको समयमा ठेकेदारको घर पत्ता लागाउनु नै चुनौ’तीको कुरा रहेको थियो ।
बिस्तारै गल्लीहरुमा खोज्दै जाने क्रममा ठेकेदारको अहिलेको अ’स्थाई बस्ने ठाउ भेटियो । केहि समयको छलफल पछि ठेकेदार आफु नै मजदुरहरु भएको ठाउमा आए र वडा प्रहरी कार्यालय बैदामबाट खटिएका प्रहरीको सहयोगमा स’मस्याको समा’धान गरियो ।
आफुले खान बस्नको व्यवस्था गरिदिने र हिसाब मिलेपछि घर जाने बातावरण मिलाईदिने भन्दै ठेकेदारले तिन दिनको म्याद मागेका छन्। अहिले मजदुरहरुलाई वडा नम्बर ५ मा एउटा हलमा रखिएको छ भने उनीहरुको खानाको व्यवस्था पनि भैसकेको छ।
यस बिषय मा बिस्तृत जानकारीको लागि भिडियोमा हेर्नुहोस :
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको June 5, 2021 1138 Viewed